ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မအူပင်) - ဝီကီပီးဒီးယား
အကျယ်အဝန်း ၄၂.၅၅၂ ဧက
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မအူပင်)သည် ရန်ကုန်မြို့အနောက်ဘက်ကီလိုမီတာ ၁၀၀ ခန့်တွင်ရှိသော မအူပင်မြို့နယ်တွင်တည်ရှိပြီး၊ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးရှိ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်သုံးခုအနက် တစ်ခုဖြစ်သည်။ တက္ကသိုလ်သည် ကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့် ကွန်ပျူတာနည်းပညာဘွဲ့များကို ပေးအပ်သည်။ တက္ကသိုလ်၏ကျောင်းဝင်းသည် ၄၂.၅၅၂ ဧကအထိကျယ်ပြန့်သည်။ 
၂ ပေးအပ်သော ဘွဲ့များ
၄ ပါမောက္ခချုပ်များ / ကျောင်းအုပ်ကြီးများ
၆.၂ ကျောင်းသားအစည်းအရုံးများ / ကလပ်များ
အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်(မအူပင်)ကို ၂၀၀၃ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလတွင် တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၇ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ၊ ၂၀ ရက်နေ့တွင် တက္ကသိုလ်အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မအူပင်)အဖြစ် ပြောင်းလဲခဲ့သည်။
၁ ရိုးရိုးဘွဲ့ B.C.Sc ၅ နှစ်
၂ ရိုးရိုးဘွဲ့ B.C.Tech ၅ နှစ်
၃ ဘွဲ့လွန်ဒီပလိုမာသင်တန်း D.C.Sc ၁ နှစ်
ပါမောက္ခချုပ်များ / ကျောင်းအုပ်ကြီးများ[ပြင်ဆင်ရန်]
၁ ဒေါ်မိုးမိုးဝင်း ကျောင်းအုပ်ကြီး
၂ ဒေါ်တာတာခင် ကျောင်းအုပ်ကြီး
၃ ဒေါက်တာမီမီစုသွင် ကျောင်းအုပ်ကြီး
၄ ဒေါက်တာသင်းသင်းထိုက် ကျောင်းအုပ်ကြီး
၅ ဒေါက်တာလှမြတ်ကောင်း ကျောင်းအုပ်ကြီး
၆ ဒေါက်တာနှင်းမင်းဦး ကျောင်းအုပ်ကြီး
၇ ဒေါက်တာသဲနုဖြူ ကျောင်းအုပ်ကြီး
၈ ဒေါက်တာခိုင်ခိုင်ဦး ကျောင်းအုပ်ကြီး
၉ ဒေါက်တာသန္တာသိန်း ပါမောက္ခချုပ်
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် MikroTik ပညာ​​ရေးဆိုင်ရာသင်တန်း ဖွင့်လှစ်ရန် MikroTik အကယ်ဒမီနှင့်အတူ ပူး​ပေါင်းခဲ့သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် ကျောင်းသားများသမဂ္ဂကို တရားဝင်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မအူပင်) ကျောင်းသားများသမဂ္ဂ ဟုခေါ်သည်။
ကျောင်းသားအစည်းအရုံးများ / ကလပ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင်နှစ်အတွင်းတွင် ပါမောက္ခများနှင့်ဆရာများ၏ပံ့ပိုးမှုဖြင့် အိုင်တီကလပ်ကို တည်ထောင်ခဲ့ပြီး တက္ကသိုလ်၏ပါမောက္ခချုပ်မှ အသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ ၎င်းကို အိုင်တီကလပ် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မအူပင်) အဖြစ်လူသိများသည်။
Music Club၊ Dance Club, Handmade Club, E-Sport Club တို့ကို ကျောင်းသားများသမဂ္ဂမှ ကျောင်းသားကလပ်များ အဖြစ်တည်ထောင်ပေးထားသည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၂၂ ရက်နေ့တွင် တက္ကသိုလ်၏ထုတ်ကုန်ပြပွဲကို ကျင်းပခဲ့သည်။  ကျောင်းသားများသည် ထုတ်ကုန် ၄၁ ခုကို ပြသခဲ့သည်။ ထုတ်ကုန်ပြပွဲတွင် Information System of Private Hospital , Trip Advisor နှင့် Garden System တို့သည် ပထမ၊ ဒုတိယနှင့်တတိယဆုအသီးသီးရရှိခဲ့ကြသည်။ Smart Restaurant , APineKine နှင့် Smart Township System တို့သည်နှစ်သိမ့်မှုဆုများရရှိခဲ့သည်။
↑ BackGround History » Computer University (Maubin) (in en-US)။
↑ University Information။ 8 April 2018 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ ၁၄ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၆ တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Faculty – University of Computer Studies (Maubin) Archived5June 2019 at the Wayback Machine.". Retrieved 2020-04-27.
↑ "Mikrotik Academy – University of Computer Studies (Maubin) Archived5June 2019 at the Wayback Machine.". Retrieved 2020-04-27.
↑ Internally retrieved from the University's notice board. announced in December 2017.
↑ Product Show – University of Computer Studies (Maubin)။ Apr 27၊ 2020 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ “ပွဲရက်နီးလာတဲ့တစ်လလောက်မှာ တစ်ညကို ၄ နာရီလောက်ပဲ အိပ်ရတော့တယ်” (in en)။
↑ Smart Restaurant စနစ်ရေးဆွဲသူ ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ် (မအူပင်) ကျောင်းသားများနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း (in en)။
↑ Smart Township ပရောဂျက် ဖန်တီးသူများနှင့်တွေ့ဆုံခြင်း (in en)။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(မအူပင်)&oldid=648944" မှ ရယူရန်
ဝီကီဒေတာနှင့် ဝီကီပီးဒီးယားတွင် တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ကွဲပြားမှုရှိသော စာမျက်နှာများ
ဤစာမျက်နှာကို ၁ မတ် ၂၀၂၁၊ ၀၉:၃၆ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။